Fahamka Sida Lacag Bixin Halki Taabto Ay Caawiso Raadintaada Noolaha | Martech Zone
Fahamka Sida Lacag Bixin Halki Taabto ay Caawiso Raadintaada Noolaha ah
Khamiis, Janaayo 22, 2015 Sabtida, Janaayo 14, 2017 Douglas Karr
Maalin walba adiga ayaa lagaa qodayaa iyadoo lagu suuqgeynayo gurus… uma baahnid inaad lacag ku bixiso qasabadaha. Noqo mid asal ah, qor waxyaabo aad u wanaagsan, ku wadaag warbaahinta bulshada - iyo sixir ahaan iibku wuu iman doonaa isagoo garaacaya albaabkaaga. Mise? Waxaan usii wadaa wacdinta dhagaystayaashayada inaysan marna ahayn wax dhexdhexaad ah mid kale, waa sida ay wax u quudin karaan ama ay isula raaci karaan midba midka kale. Arinta Dhiciyaan Search Engine oo ay kasoo horjeeddo Su'aalaha Suuq-geynta iyo Bixi Hal Guji, waxaa jira xoogaa is waafajin ah oo laga faa'iideysto labadaba.
Podcast-keena soo socda ayaa daaran Edge-ka Webka Raadiyaha ka wada hadli doonaan mawduucan iyo sidoo kale sababaha kale ee ay tahay inay shirkadaadu maal gashato Pay Per Click.
Beddelashada ereyada muhiimka ah - Haddii aad ka bilaabayso jidka qoraalka qoraallada si aad u hesho darajo, maxaad ka qori doontaa? Maxay yihiin ereyada muhiimka ah ee ugu fiican ee badalaya taraafikada ugu badan? Shirkado aad u tiro badan ayaan wax fikrad ah ka haysan… waxay cilmi baaris ku sameeyaan warshadooda iyo kuwa la tartamaya waxayna la yimaadaan liis. Kadibna bilo waxay adeegsadaan tan oo kheyraad ah si ay ugu kala sarreeyaan shuruudahaas. Waxaa laga yaabaa inay ku kala sarreeyaan to kaliya si ay u ogaadaan in qofna uusan u beddelin boggooda si kasta. Halkii ay ku maalgashan lahaayeen waqtigaas iyo tamarta nuxurka iyo raadinta dabiiciga ah, waxay ku bixin lahaayeen lacag yar mushaharkiiba halkii guji oo runtiina tijaabiyeen iskudhafka ereyada muhiimka ah si loo arko waxa beddelay sida ugu wanaagsan. Markaad ogaato waxa beddelaya, markaa waad qori kartaa, wadaagi kartaa, korna u qaadi kartaa waxyaabaha ku saabsan mowduuca si loo hagaajiyo darajayntaada raadinta isla markaana loo yareeyo qiimaha guud ee halkii hoggaamiyeba.
Hantida SERP - Weligaa ma raadisay shey ama summad weyn oo ma la yaabtay markii aad aragtay in ay bixiyeen xayeysiis ku saabsan badeecadooda ama magacooda astaan? Waxaa jira sababo dhowr ah oo tan jira… mida hore ayaa ah sidaa darteed tartamayaashoodu dalab kuma imaan natiijooyinkaas. Laakiin sababta ugu adag ayaa ah inaad si weyn u kordhin karto heerka gujiskaaga ee bogga Natiijooyinka Mashiinka Raadinta (SERP) xitaa markaad ku jirto darajooyinka aad u sarreeya! Markaad darajada koowaad gaarto, waxaad ku kordhin kartaa gujiska illaa heerka (CTR) 50%, xayeysiiska PPC oo ay weheliso qiimeynta laga bilaabo 2 illaa 4 wuxuu kordhin karaa CTR 82%, iyo qiimeynta ka hooseysa 5 CTR wuxuu kordhin doonaa 96% celcelis ahaan !
Laga soo bilaabo Dhulka Mashiinka Raadinta - Cilmi-baarista Google: Xitaa Iyadoo A # 1 Darajayn Dabiici ah, Xayeysiisyada Lacagta La Bixiyo Waxay Bixiyaan 50% Guji Kordhin:
Heerarka Beddelka - Ka dib marka isticmaaluhu ku riixo SERP oo uu yimaado goobtaada, waxaad si fiican u ogaan kartaa, marka laga reebo taraafikada tooska ah, taraafikada raadinta lacag bixinta ayaa leh qiimaha ugu sarreeya iyo heerarka beddelka ugu weyn. Taasi waa wax aad u muhiim ah waana inaad dejiso Analytics si sax ah ula soco mid kasta oo ka mid ah ololayaashaada si taxaddar leh. Aragtida ka dambeysa tan waa mid fudud - marka isticmaaleyaasha mashiinka raadinta ay diyaar u yihiin inay beddelaan, waxay ku boodaan SERP oo waxay gujiyaan natiijooyinka sare.
Dib uhabaynta - Faa’iidada ugu weyn ee ay PPC ku leedahay istiraatiijiyaddaada SEO waa faa iidada dib u qiimeynta. Dib-u-sameynta ayaa bartilmaameedsanaya xayeysiinta dadka horey u booqday bartaada (laakiin wax iibsi ah ma sameynin) iyada oo loo marayo farriin loogu talagalay ama dalabyo gaar ah. Adeegsiga Google Adwords, tusaale ahaan, waxaad ku abuuri kartaa ololeyaal raadinta iyo xitaa bogag saddexaad oo soo bandhigi kara xayeysiiskaaga ka dib booqde soo booqda bartaada ka dibna ka tago. Waxaan ka baqayaa inaadan raaci karin qof sidaas oo kale ah raadin dabiici ah sidaa darteed waa wax aan caadi aheyn oo faa'iido leh.
Ha iska tuurin raadinta lacagta la siiyay. Maaddaama xeeladaha nuxurka ay cirka isku shareereen caan ahaanta, tartanku waa mid daran - oo u baahan miisaaniyado dhiirrigelin ah si loo sameeyo farqiga u dhexeeya. Waxaan kugu dhiiri galin lahaa inaad shaqaaleeysid xirfadle (hadii kale miisaaniyadaada waxaa lagu cuni doonaa qiime aan la fahmi karin!). Tijaabi tanno isku dhafan, ka faa'iideysii hababka ugu fiican, ku cayrsho ereyada muhiimka ah ee beddelaya istiraatiijiyad dabiici ah si aad hoos ugu dhigto qiimaha halkii macdanta, isla markaana aad ugu beddesho dadkaaga shirkaddaada. Bixi gujin kasta waa saaxiibka ugu fiican ee raadinta dabiiciga ah.
Tags: sicir-bararkabeddelashada ereyada muhiimka ahgeeska raadiyaha webkabeddelka ereygaorganicraadinta dabiiciga ahBixi halkii gujippcdib u soo kabashadadhulka mashiinka raadintaserpxarig ctrhantida maguurtada ah
Douglas Karr Thursday, January 22, 2015 Saturday, January 14, 2017
Diyaar ma u tahay inaad kiciso suuqgeynta 'Instagram'?
Geofeedia: Kormeerka Warbaahinta Bulshada, Sirdoonka iyo Falanqaynta Goobta